“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख ५ गते विहिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल” – Etajakhabar
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख ५ गते विहिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग श्रीसूर्य उत्तरायण,वसन्तर्तुः,परिधावी नाम संवत्सर,शाके १९४१,विक्रमसम्वत २०७६ साल वैशाख ५ गते विहिबार नेपाल सम्बत ११३९ चौलाथ्व,सन् २०१९ अप्रिल १८ तारिक चैत्र शुक्लपक्ष चतुर्दशी तिथि साँझ ६ वजेर ५५ मिनेटसम्म,हस्ता नक्षत्र राती ९ वजेर ११ मिनेटसम्म,व्याघातयोग,गरकरण,आनन्दादियोग रक्ष,सूर्य मेष राशीमा,चन्द्रमा कन्या राशीमा ।
मुहूर्त – शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷३८ वजेबाट मध्यान्ह १२÷२९ वजेसम्म रहनेछ । सामान्य गुली काल मुहूर्तः–विहान ८÷५१ वजेबाट १०÷२७ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ राहुकाल मुहूर्तः–अपरान्ह १÷४० वजेबाट ३÷१६ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–विहान ६÷३९ वजेबाट ७÷१५ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ दूरमुहूर्तः–विहान ९÷५५ वजेबाट १०÷४६ वजेसम्म र अपरान्ह ३÷३ वजेबाट ३÷५५ वजेसम्म रहनेछ
बार वेला – सूर्योदयबाट प्रातः ७÷१५ वजेसम्म शुभ वेला,७÷१५ वजेबाट ८÷५१ वजेसम्म रोग वेला,८÷५१ वजेबाट १०÷२७ वजेसम्म उद्वेग वेला,१०÷२७ वजेबाट १२÷४ वजेसम्म चर वेला,१२÷४ वजेबाट १÷४० वजेसम्म लाभ वेला,१÷४० वजेबाट ३÷१६ वजेसम्म अमृत वेला,३÷१६ वजेबाट ४÷५३ वजेसम्म काल वेला र ४÷५३ वजेबाट सूर्यास्तसम्म शुभ वेला रहनेछ ।
बार वेला – सूर्यास्तबाट ७÷५३ वजेसम्म अमृत वेला,७÷५३ वजेबाट ९÷१७ वजेसम्म चर वेला,९÷१७ वजेबाट १०÷४१ वजेसम्म रोग वेला,१०÷४१ वजेबाट १२÷४ वजेसम्म काल वेला,१२÷४ वजेबाट १÷२८ वजेसम्म लाभ वेला,१÷२८ वजेबाट २÷५२ वजेसम्म उद्वेग वेला,२÷५२ वजेबाट ४÷१५ वजेसम्म शुभ र ४÷१५ वजेबाट सूर्योदयसम्म अमृत वेला रहनेछ । शुभाशुभ“जीवानां जगताम् चैव सर्जक पालक प्रभु । वरद सुखदो नित्यम् सर्वान् रक्षतु सर्वदा । ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति”।
मेषः– मित्रहरु घट्ने छन् । संघर्षको बाटो तय गर्नु पर्नेछ । भावि योजनाको बारेमा विचार विमर्श गर्नु होला । धैर्यता नटुटाउनु होला । व्यापार व्यवसायबाट थोरै आम्दानी बढ्नेछ ।
वृषः– काममा देखिएका समस्या केहि कम भएर जानेछन् । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । पढाईमा रुची बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ । भ्रममा नपर्नु होला ।
मिथुनः–पारिवारिक समस्या बढ्नेछन् । समयमा काम गर्ने प्रयत्न गर्नु होला । संचित धनको नास हुनेछ । भ्रममा पारेर फाइदा लुट्ने छन् सतर्क रहनु होला । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन घट्नेछ ।
कर्कटः– सहास,धैर्यता र कार्य क्षमता बढ्नेछ । आफन्तबाट सहयोग मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । आर्थिक कारोवारमा सुधार अउनेछ । पुराना समस्या केहि समाधान भएर जानेछन् ।
सिंहः– समयले थोरै साथ दिनेछ । लगनशिलता बढाउनु पर्ने देखिन्छ । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । आर्थिक कारोवारमा विशेष सावधानी अप्नाउनु होला । आफन्तको सहयोग अल्प मिल्नेछ ।
कन्याः– समस्याबाट पूर्ण मुक्ति भने मिल्ने छैन तर केहि अवरोधहरु हटेर जानेछन् । शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ । पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ । शुभ कार्य एवं थोरै आनन्द मिल्नेछ ।
तुलाः– समयले साथ दिने छैन । व्यर्थको घुमाई फिराई हुनेछ । फजुल खर्च बढ्नेछ । काम गरेर जश भन्दा अपयश बढि मिल्नेछ । व्यापारमा घाटा बढ्नेछ । गृह,वाहन र भातृ सुखमा कमि आउनेछ ।
वृश्चिकः– आत्मविश्वास बढ्नेछ । गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । घर परिवार आफन्तबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । सुवर्ण रत्नहरुको प्रप्ति हुनेछ ।
धनुः– अवरुद्ध काम अगाडि बढ्ने छन् । प्रयत्न गरेमा नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा थोरै सफलता मिल्नेछ । आर्थिक कारोवारमा सुधार आउनेछ ।
मकरः– काममा देखिएका समस्या केहि समाधान भएर जानेछन् । जीवन साथिको सहयोग लिएर काम गरेमा थोरै भए पनि उपलब्धि हात लाग्नेछ । यात्राको सम्भावना देखिन्छ । धर्म प्रति रुची बढ्नेछ ।
कुम्भः– प्रतिकुल वातावरणमा काम गर्नु पर्नेछ । काम गरेर हात लाग्यो शून्य हुनसक्छ । खानपानका कारण स्वास्थ्य कमजोर हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । धोका दिनेछन् ।
मिनः– आशा र भरोसा बढ्नेछ । प्रयत्नबाट नयाँ काम हात पारिनेछ । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । विदेश यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । पारिवारिक सुख मिल्नेछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०४, २०७६ समय: २१:३८:५३
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख ९ गते सोमबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख ८ गते आइतबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : यो साता तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल वैशाख ७ गते देखि १३ गतेसम्मको
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख ७ गते शनिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख ६ गते शुक्रबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”